niamh | Gcina A Isitimela
umbhali: Niamh Waters
ekhaya > Niamh Waters
Guide Quick: Ehamba ngololiwe Ukusuka eParis To Nice
Ixesha lokuFunda: 3 imizuzu Oololiwe baseParis naseNice badityaniswa yinkqubo kaloliwe ekhawulezayo nenempumelelo ngoko ke ukutyelela la maphondo mabini ngaxeshanye akuzange kube lula. Ezi kwimimandla emibini umdla amawaka-waka eendwendwe kunyaka ngamnye. Ubuxoki obumnandi entliziyweni yeRusera eyiRussian…
Qeqesha uhambo eFrance, Iingcebiso zokuhamba
Ixesha lokuFunda: 3 imizuzu IJamani ineentaba eziphakamileyo, iindawo ezisemaphandleni zokuphefumla, nezixeko cosmopolitan ezithi zenze uhambo ngololiwe apho amava ovusa. Zininzi iindawo ezintle zokubona kubandakanya iBerlin, eMunich, Hamburg, Cologne, no Frankfurt, nabanye abaninzi. Le miceli mngeni kunye needolophu ezincinci zonke amaqhina oqhagamshelwano yi inkqubo kaloliwe-hi isantya kakuhle nemibutho. lo…
Ixesha lokuFunda: 3 imizuzu YaseVenice ngomnye imizi idolo kwaye imilingo e-Italy kunye sifikelela lula ngololiwe. Ngokutyelela eVenice ngexesha leeholide Easter, unako spring yezulu ezimnandi. Oku kukuvumela ukuba bachithe usuku lonke ngaphandle. Ukuya kwiziko lembali…
Ixesha lokuFunda: 3 imizuzu Interrailing iingcebiso esinga lwabiwo kusenokwenzeka ukuba uceba uhambo lwakho kakuhle. Indleko amatikiti etreyini, yokuhlala, ukutya kunye lokuzonwabisa ziyahluka phakathi kwamazwe aseYurophu, kodwa kukho iindlela ezininzi ukuze sinandiphe uhambo zexabiso eliphantsi. Ngethamsanqa, kunye nokulungiselela ezinye, umdla isiporo…